Orinasa mpamatsy alika alika any Shina | Huanyi
Fampidinana ny teoreman'ny mari-pana amin'ny maripana.
Ny polymer gel mangatsiatsiaka dia mitovy amin'ny polymer gel amin'ny paty mangatsiaka ho an'ny zazakely. Ny polymer gel miaraka amin'ny atin'ny rano avo lenta dia mifoka ny hafanana avy amin'ny vatan'olombelona mankany amin'ny tsihy ary miankina amin'ny fitantanana avo sy ny fanaparitahana ny polimeran'ny gel mba hanafanana mba hamoronana tsara fifanakalozana hafanana sy fifindrana hafanana eo anelanelan'ny hafanan'ny vatan'olombelona sy ny matotra mangatsiaka ary koa eo anelanelan'ny tsiranoka gel sy ny rivotra.
L w hateviny Weight
Anaran'ny vokatra: Tsy mahazaka rivotra mifono rivotra any an-kalamanjana izy ireo alika hihena alika ho an'ny biby fiompy
Material: avy fitaovana: Nylon + PVC + savony spaonjy; fitaovana anatiny: CMC + Sponge foam + Rano voadio.
Weight: 1700g, namboarina
Size: 50 * 60cm, namboarina
Color: Navy manga, namboarina
endri-javatra: Reusable, Eco-namana, Non-poizina, Non-caustic.
Fotoana santionany amin'ny famatsiana: 7 andro na mahery aorian'ny fanamafisana ny baiko dia azo omena ny santionan'ny vokatra azo aorian'ny 1-3 andro.
Maody vidiny: Ex Works, FOB, CIF, CRR, CIP, DDP, DDU.
Fe-potoana fandoavana: 30% mialoha mialoha; 70% aloa alohan'ny fandefasana na amin'ny fampisehoana kopia B / LT / T, Paypal
1. Orinasa sa orinasa tokana ianao?
Manana orinasa hamokarana tsiranoka mangatsiaka mandritra ny 10 taona izahay. Ny kalitao sy ny serivisy tsara indrindra dia mendrika ny atokisanao.
2. Nahoana izahay no afaka mifidy anao?
(1). Azo itokisana --- izahay no tena orinasa, manokan-tena amin'ny fandresen-dahatra izahay
(2). Professional --- manolotra ny vokatra biby fiompy araka izay tadiavinao tokoa izahay
(3). Factory --- manana orinasa izahay, koa manana vidiny mirary sy fandefasana haingana
(4). Santionany --- Ny serivisinay dia manolo-tena hanome santionany ao anatin'ny 24 ora, ary afaka manome santionany maimaimpoana izahay
3. Ahoana ny vidin'ny fandefasana?
Raha tsy lehibe ny entanao dia afaka mandefa entana aminao izahay amin'ny alàlan'ny forwarder, toy ny FEDEX, DHL, niara-niasa tamin'izy ireo nandritra ny fotoana maharitra izahay, noho izany dia manana vidiny lafo izahay. Raha lehibe ny entanao dia halefanay aminao amin'ny alàlan'ny ranomasina, azonay atao ny manonona ny vidiny aminao, dia afaka misafidy ianao na hampiasa ny mpandefa anay na ny anao.
4. Ahoana ny vidiny? Azonao atao ve ny manamboatra azy io mora kokoa?
Ny vidiny dia miankina amin'ny entana tadiavinao (endrika, habe, habe)
Beat Beat rehefa avy nahazo famaritana feno ny zavatra tadiavinao.
5. Ahoana ny amin'ny santionany? Inona ny fandoavam-bola?
Fotoana santionany: 1-5 andro aorian'ny fanamafisana ny lamina & ny santionany.
T / T 30% petra-bola, mandanjalanja alohan'ny fandefasana azy amin'ny factory.
Previous: kitapo mangatsiaka divay
Manaraka: Kitapo gel misy hafanana mikraoba
Fandriana alika mangatsiaka
Cooling Pad ho an'ny alika